DEG DEG: Shirkii Teendhada Afisyooni oo lagu kala tegey & Madaxtooyada oo eed tuurtay! | Hadalsame Media
Home Wararka DEG DEG: Shirkii Teendhada Afisyooni oo lagu kala tegey & Madaxtooyada oo...
DEG DEG: Shirkii Teendhada Afisyooni oo lagu kala tegey & Madaxtooyada oo eed tuurtay!
(Muqdisho) 07 Maarso 2021 – Shirkii Teendhada Afisyooni ee Madaxda XF iyo Maamul-goboleedyada ayaa burbur ku dhamaaday.
Wasiirka Warfaafinta DF Somalia ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay ka eedeeyey maamullada Puntland iyo Jubaland oo uu ku tilmaamay jid iyo jiho diid.
Arrintan ayaa nasiib darro ah maadaama shirkan aad looga war dhowrayey, iyadoo aan la ogayn tillaabada xigta ee la qaadayo.
Waloow Maamullada la carrabaabay lagu eedeeyey cago jiid iyo shuruudo badan, misna XF lafteeda ayaa lagu tuhmayaa inay caqabaad jidka dhigayso si ay mudada u kororsato.
Previous articleSomalia ma waxay u jihaysanaysaa dhanka Shiinaha & Ruushka? Lix QODOB oo ay tahay in laga baaraandego
Next articleYAA EEDDA LEH? Min 3 eedood oo ay kala leeyihiin MW Farmaajo & Maamul-goboleedyada isaga u eedaysan